eTurboNews inomira kumashure kweRusununguko rwePepanhau nePEN Belarus
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Belarus Kuputsa Nhau » eTurboNews inomira kumashure kweRusununguko rwePepanhau nePEN Belarus
Belarus Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
39 min kuverenga
PEN America CEO Suzanne Nossel akati zvinotevera :: Kana hurumende yanyaradza nekutsika vanyori vayo, inoratidza huwandu hwekunyara uye kuora izvo vatungamiriri vari kuronga kuvanza, asi panzvimbo pezvo vanofumura chete. Vatungamiriri veBelarus vanogona kufunga kuti vanogona kudzvinyirira chokwadi nekusungisa avo vanotsunga kuzvitaura, asi nyaya yekuda kwevanhu uye chiyero cheudzvanyiriri hwoutsinye ichawana nzira yayo kuenda kupasi. Takamira takabatana nevanyori vePEN Belarus uye takatsunga kuva nechokwadi chekuti mazwi avo akakosha anonzwika uye kodzero dzavo dzekuzviratidza dzinotsigirwa. ”
eTurboNews sebhuku rakazvimirira rakamira kuseri kwePEN hanzvadzi yaAmerican Organisation PEN Belarus.
Iyo Belarusian Justice Ministry yafamba kuti ivhare PEN America hanzvadzi hanzvadzi PEN Belarus. Izvo zvinouya pakati pekupamba svondo rino kumahofisi emasangano nenhepfenyuro.
PEN Belarus yakagamuchira chiziviso chehushumiro chinangwa chekumisa sangano zuva rimwe chetero boka akasunungurwa mushumo kuratidza kuwedzera kwekutyorwa kwekodzero dzetsika munyika.
PEN America yakamira pamharadzano yemabhuku nekodzero dzevanhu yekudzivirira kutaura kwakasununguka muUnited States nepasirese. Isu tinotsigira rusununguko rwekunyora, tichiziva simba reizwi kushandura nyika. Chinangwa chedu ndechekubatanidza vanyori nevabatsiri vavo kupemberera yekusika kutaura uye kudzivirira rusununguko rwunoita kuti zvikwanisike.
eTurboNews inhengo yePEN America.
Tsamba yakatumirwa kuPEN Belarus musi waChikunguru 22 inoti:
Dare Repamusorosoro reRepublic of Belarus rakatanga nyaya yevagari pachinzvimbo cheMinistry of Justice yeRepublic of Belarus vachipokana neRepublican Public Association 'Belarusian PEN Center' yekubvisa.
Mumiriri weRepublican Public Association 'Belarusian PEN Center' anofanirwa kuoneka panguva yakatarwa nemagwaro anosimbisa mvumo yekutora nhanho.
Chinhu chinosuruvarisa ndechekuti ini handione kupera kwazvose. Iko kune kwakazara kuchenesa-pasi kwenyika yeBelarusian. Vanoparadza maererano nechirongwa chadhiabhorosi.
Iyo Belarusian PEN Center yakarongeka inounganidza ruzivo rwekuitwa kwetsika nekodzero dzevanhu maererano nevashandi vetsika.
Kubva muna Nyamavhuvhu 2020 kusvika parizvino, isu takave zvapupu uye zvinyorwa zvezvakafanorongedzwa kumanikidzwa kwakakwira kunoiswa kune ese akasununguka nzanga uye tsika tsika kunyanya. Ino inguva inosiririsa yerusununguko rwekutaura, rusununguko rwekugadzira zvinhu, rusununguko rwekufunga, nezvimwe. Dambudziko rezvematongerwo enyika nehukama zvinoratidzwa nekutyorwa kwekodzero dzevanhu nerusununguko, kutambudzwa kwevanopokana, kuvharirwa, mamiriro ekutya, uye kudzingwa kwevanotsigira shanduko.
Gwaro iri rine manhamba uye mienzaniso zvichibva muunganidzwa uye synthesis yeruzivo kubva kune akavhura masosi, tsamba uye kutaurirana kwega nehunhu hwenhu kubva panguva yaNdira kusvika Chikumi 2021.
Pakati pehafu yekutanga ya2021, takaona Mhosva mazana matanhatu negumi nembiri dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu netsika nemagariro.
Kuwanda kwekutyorwa muna Ndira-Chikumi 2021 kwakapfuura huwandu hwezviitiko zvakanyorwa zvegore rese ra2020 (593) (Tiri kutaura chaizvo nezve zviitiko zve2020, izvo zvakaverengerwa mukuwongorora kwekutarisa mukati megore iro. Ndichiri kuunganidza data pazviitiko muna 2021, isu tinoenderera mberi tichinyora makesi akashaikwa kubva muna 2020. Zvinoreva kuti paive nemamwe acho.). Zvinogona kupikiswa kuti kumanikidzwa uye kudzvanyirirwa, kwave kwakanyanya kusimba kubva Nyamavhuvhu 2020, uye kwakatanga panguva yemushandirapamwe wemutungamiri wenyika, hakuna kupera simba, panzvimbo pezvo kudzorerwa kuri kuwana mafomu matsva uye kuri kukanganisa huwandu hwakawanda hwezvinhu zvetsika zveBelarusian .
Simba rekutyorwa kwakanyorwa kubvira 2020:
Kubva munaJune 30, 2021, 526 vanhu vaizivikanwa sevasungwa vezvematongerwo enyika muBelarus. Pahuwandu hwevasungwa vezvematongerwo enyika, 39 vashandi vetsika.
Paviel Sieviaryniec, munyori uye wezvematongerwo enyika - 25.05.2021 akatongerwa Makore manomwe mune yakanyanya-chengetedzo koloni;
Maksim Znak, gweta, mudetembi uye munyori wenziyo - anga ari mune nzvimbo yevasungwa kubvira 18.09.2020;
Viktar Babaryka, mutariri wehunyanzvi - 06.07.2021 (Mitsara yataiziva mukuita kwekunyora zvinyorwa) akatongerwa Makore gumi nemana mune yakanyanya-chengetedzo chirango koloni;
Ihnat Sidorčyk, nyanduri uye director - 16.02.2021 akatongerwa Makore matatu e "khimiya" (Kazhinji, imwe yemhando dzechirango inonzi "khimiya", zvichireva kurambidzwa kwerusununguko nekutumirwa kunzvimbo yakavhurika yerudzi rwekururamisa.);
Miokola Dziadok, mumiriri wesangano reanarchist, munyori wemabhuku ejeri - anga ari mune nzvimbo yevasungwa kubvira 11.11.2020;
Julija Čarniaŭskaja, munyori uye musayendisiti wetsika - kubvira 20.05.2021 anga ari pasi kusungwa pamba (pasina mukana wekubuda kana kutaurirana nenyika yekunze, kunze kwegweta rake);
Kaciaryna Andrejeva (Bachvalava), munyori uye mutori wenhau - 18.02.2021 akatongerwa Makore maviri mukoloni yechirango;
Andrej Pačobut, mudetembi uye nhengo ye "Kubatana kweMatanda" - anga ari mune nzvimbo yevasungwa kubvira 27.03.2021;
Andrej Alaksandraŭ, mudetembi, mutori wenhau uye maneja maneja - anga ari mune nzvimbo yevasungwa kubvira 12.01.2021;
Maryja Kaleśnikava, muimbi uye maneja wezvirongwa zvetsika - anga ari mune nzvimbo yevasungwa kubvira 12.09.2020;
Ihar Bancar, muimbi - 19.03.2021 akatongerwa Makore matatu e "khimiya";
Aleksey Sanchuk, muridzi wengoma - 13.05.2021 akatongerwa Makore gumi nemana mune yakanyanya-chengetedzo chirango koloni;
Anatol Khinevich, bard– 24.12.2020 akatongerwa Makore maviri mukoloni yechirango;
Alaksandr Vasilevič, maneja wezvirongwa zvetsika uye muzvinabhizinesi - anga ari mune nzvimbo yevasungwa kubvira 28.08.2020;
Eduard Babaryka, maneja wetsika - anga ari mune nzvimbo yevasungwa kubvira 18.06.2020;
Ivan Kaniavieha, director wesangano rekonzati - 04.02.2021 akatongerwa Makore maviri mukoloni yechirango;
Mia Mitkevich, tsika maneja - 12.05.2021 akatongerwa Makore maviri mukoloni yechirango;
Liavon Khalatran, tsika maneja - 19.02.2021 akatongerwa Makore matatu e "khimiya";
Andżelika Borys, sachigaro we "Union of Poles muBelarus" - anga ari mu nzvimbo yevasungwa kubvira 23.03.2021;
Ala Sharko, art muongorori- anga ari mune nzvimbo yevasungwa kubvira 22.12.2020;
Ales Pushkin, Artist - anga ari mune nzvimbo yevasungwa kubvira 30.03.2021;
Siarhei Volkau, mutambi - 06.07.2021 akatongerwa Makore gumi nemana mune yakanyanya-chengetedzo chirango koloni;
Danila Hancharou, mugadziri wemwenje - 09.07.2021 akatongerwa Makore maviri mukoloni yechirango;
Aliaksandr Nurdzinau, muimbi - 05.02.2021 akatongerwa Makore gumi nemana mune yakanyanya-chengetedzo chirango koloni;
Uladzislau Makavetski, muimbi - 16.12.2020 akatongerwa Makore maviri mukoloni yechirango;
Artsiom Takarchuk, mugadziri - 20.11.2020 akatongerwa Makore maviri mukoloni yechirango;
Rastsislau Stefanovich, Dhizaina uye dhizaini - anga ari mune nzvimbo yevasungwa kubvira 29.09.2020;
Maksim Taccianok, dhizaini - 26.02.2021 akatongerwa Makore matatu e "khimiya";
Piotr Slutski, cameraman uye sound engineer - anga ari mune nzvimbo yevasungwa kubvira 22.12.2020;
Pavel Spiryn, screenwriter uye blogger - 05.02.2021 akatongerwa Makore maviri mukoloni yechirango;
Dzmitry Kubarau, UX / UI dhizaini - 24.03.2021 akatongerwa Makore gumi nemana mune yakanyanya-chengetedzo chirango koloni;
Ksenia Syramalot, mudetembi uye mutori venhau, mudzidzi weFakisheni yeFilosofi neSocial Sayenzi yeBelarusian State University - 16.07.2021 akatongerwa Makore maviri mukoloni yechirango;
Yana Arabeika uye Kasia Budzko, vadzidzi veFakisheni yeAesthetic Dzidzo yeBelarusian State Pedagogical University - 16.07.2021 vakatongerwa Makore maviri mukoloni yechirango;
Maryia Kalenik, Mudzidzi weFakisheni yeExphibition Dhizaina kuChikemy of Arts - 16.07.2021 akatongerwa Makore maviri mukoloni yechirango;
Viktoryia Hrankouskaya, aimbove mudzidzi weFakisheni yeArchitecture yeBelarusian National technical University - 16.07.2021 akatongerwa Makore maviri mukoloni yechirango;
Ihar Yarmolau uye Mikalai Saseu, vatambi - 10.06.2021 akatongerwa Makore gumi nemana mune yakanyanya-chengetedzo chirango koloni;
Anastasiya Mirontsava, muimbi, akadzingwa kubva gore rapfuura, mudzidzi weChikemy of Arts - 01.04.2021 akatongerwa Makore maviri mukoloni yechirango.
Kwechinguva, maneja maneja Dzianis Chykaliou ane chinzvimbo che "aimbova" musungwa wezvematongerwo enyika, nekuti parizvino akasununguka pasi pekuzivikanwa kuti asabude munyika. Asi mukuteerera mutongo, achamanikidzwa kuenda kunzvimbo yakavhurika yerudzi rwekururamisa (ye "khimiya": akatongerwa makore matatu).
Muhafu yekutanga ye2021, 24 kutongwa vashandi vetsika vaive kutongwa zvisiri pamutemo. Pakati pavo pane vese avo vakazivikanwa sevasungwa vezvematongerwo enyika uye avo vasina chinzvimbo ichi. Vashandi vetsika nemagariro vakatongerwa nedare kuti a chirango nzvimbo yechirango chemakore maviri kusvika masere (7 vakatongerwa kukoni-yechirango), 9 vashandi vetsika - vakatongerwa 1.5-3 makore e "khimiya", 2 vashandi vetsika- vatongerwa 1-2 makore e "kusunga imba" (kurambidzwa kwerusununguko pasina kuendesa kune yakavhurika-mhando mhando yekururamisa).
Humwe hunhu hwe "chikamu" chechipiri chegore ndechekuti vashandi vetsika vakatongerwa "khimiya" uye ndokuzoburitswa kumba kwechinguva mushure mekuziviswa kwemutongo, vakatanga kugamuchira kuendeswa munaJune kunoshandira mitongo yavo munzvimbo dzakashama . Nekudaro, munaChikumi, maneja wetsika Liavon Khalatran, mudetembi uye director Ihnat Sidorchyk, muimbi Ihar Bancar nemugadziri Maksim Taccianok vakatumirwa ku "khimiya". Kuteterera kwedare kwemitongo isiri pamutemo hakuna kutungamira kuchinjiso.
Mukati mechikamu chekutsvagisa kwedu isu takatarisawo pane iyo mamiriro ekuvharirwa mumasangano akavharwa. Munguva yaNdira-Chikumi 2021, takaratidza mamiriro makumi mana nemana netsananguro kana kutaurwa kwemamiriro akasungwa nevasungwa. Idzi tsananguro dzinogumira kune ruzivo rwatinowana kuburikidza nenhau uye kuburikidza nezvinyorwa zvehama. Isu tinonzwisisa kuti mashoma masosi eruzivo, tsamba dzakaomarara uye kazhinji dzisipo nevasungwa, uye chimiro chakasimba chekudzivirira kwevasungwa hazvitibvumidze kuzivisa kukwana kweruzivo; zvisinei, kunyangwe pahwaro hwechokwadi chiripo, tinopokana kuti mamiriro ekuvharirwa anoumba, paushoma, hutsinye uye hunoshoresa kurapwa, uye mune zvimwe zviitiko zvinoratidza zviratidzo zvekushungurudzwa.
Mienzaniso yevasungwa mamiriro:
Maxim Znak akataura izvozvo akange asina kuona rima kwemwedzi mipfumbamwe. Magetsi anogara akabatidzwa muchitokisi chake.
Panguva yekutongwa kwedare musi waApril 26, Zmitser Dashkevich akataura izvozvo "Mamiriro akafanana akagadzirwa evasungwa vezvematongerwo enyika: vasungwa vezvematongerwo enyika vanomutswa dzimwe nguva dzakasiyana nevamwe vasungwa ,, kune cheki husiku, kushaya mamatiresi, hunhu hunogumbura uye kushomeka kwemapakeji."
Sero rakagadzirirwa vanhu vana rakabata vanhu gumi nevaviri. Valery akapedza mazuva makumi maviri asina metiresi negumbeze. Kwemazuva maviri akateedzana, vasungwa vezvematongerwo enyika vakamanikidzwa kuteerera nhepfenyuro yeAll-Belarusian People's Assembly. Pakati pemazuva makumi maviri ekusungwa kwake, Valery haana kumbobvira aendeswa kunogeza uye haana kumbogamuchira mapakeji kubva kumhuri yake.
"Rudzi chairwo rwekutambudza iradio, iyo inoshanda husiku uye dzimwe nguva husiku."
Mudzimai waAndrzej Poczobut akati manejimendi yetirongo yepamberi pekutongwa haisi kupa murume wake mishonga yemwoyo. Andrei ane kusagadzikana kwemwoyo. Mushonga wacho wakaendeswa kunzvimbo yekuvharirwa yeZhodino asi manejimendi haana kuupa zvakananga kuPoczobut.
"Haasi kuwana chero hutano. Akatsvuka. Dzimwe nguva anomira kushanduka kuita yero, kuva zvakajairika, chena. Wobva wachena, wozoita yero zvakare. Maziso ake anogara akazara pus. Mitezo yegumbo yakanga yadambuka uye anoda kuvhiyiwa kana kuti majoni achabvaruka. Kuzadza kwake kwakadonha, haakwanise kuzviita mutirongo. "
“Yaki tag ine rake rekutanga uye rekupedzisira zita. Ini ndoda kujekesa ipapo: kwete, ichi hachisi chiratidzo chakakosha kunyanya kune vezvematongerwo enyika. Asi iyi imwe nzira yekuparadzaniswa kwevasungwa - kureva kuti, havasi vese vasungwa vanopfeka mamaki yeyero, asi chete kondinendi yakasarudzika yakanyoreswa seprophylactic yehunhu hwavo ku "kunyanyisa". Nenzira, kusarudzika kwakadai hakusi kwehunyanzvi - maitiro aya anga aripo kubvira angangoita 2019 ”.
Pakutanga takataura nezvekusungwa zvisina tsarukano, kupomerwa mhosva, kupomerwa mhosva zvisiri pamutemo nedzimwe mamiriro ezvinhu - urwu ndirwo runyorwa rwekodzero dzinowanzo kutyorwa zvine chekuita netsika uye vanhu vanoshandisa kodzero dzavo. Kusiya (maonero akasiyana neaya anotepfenyurwa nevakuru vehurumende) ndicho chikonzero chikuru chakaita kuti vanhu vatongwe.
Isu zvakare takanyora kuwedzera kwehuwandu hwevanhu vanobva munyika kuti vave nechokwadi chekuchengetedzeka kwavo, nyaya dzekusarura mutauro, uye kodzero yekushandisa zvigadzirwa zvetsika.
Kunyanya kutariswa kunofanirwa kubhadharwa kune kuwedzera kwehutongi uye mhosva yemhosva kune iyo kushandiswa kwezviratidzo zvenyika. Iyi tsika yakaitika munyika yose. Kusvika parizvino, mureza chena-tsvuku-chena uye jasi rezvombo "Pagonya" hazvina kuzivikanwa semhirizhonga, asi ikozvino vanhu vari kupiwa mhosva kwete chete pakushandisa kwavo mureza asiwo nekusiyana mukushandiswa kwemuvara. kusanganiswa kwezviratidzo zvekare. Iko kushandiswa kwezviratidzo zvemunyika hakusi iko kwakanyanya kutariswa kwekutsvaga kwedu, asi anopfuura mazana mana emakesi munyika yose akabatwa mundima yedu yekuona chete mumwedzi mitanhatu.
Kutanga kubva muna Ndira wegore rino, dzimba dzisiri-dzekare dzekutsikisa, vaparidzi, vanogadzira mabhuku, vekunze vakazvimiririra, kusanganisira avo vane zvemukati wenyaya dzetsika, vanyori, uye kazhinji vaverengi pachavo, vauya pasi pekumanikidzwa. Saka,
Muna Ndira, vaparidzi Hienadź Viniarski naAndrej Januškievič vakasungwa uye vakabvunzurudzwa. Kutsvaga kwakaitwa mudzimba dzekutsikisa "Januskevic" uye "Knigosbor". Makomputa, nhare nemabhuku zvakatorwa. Nhoroondo dzevaparidzi vese, pamwe nechitoro chemabhuku chepamhepo knihi.by, chakavharwa ndokugara zvakadaro kwemazuva gumi nematanhatu (ingangoita mwedzi mishanu) kudzamara vavhurwa muna Chikumi 146.
Munguva ino, iyo zviitiko zvekutsikisa dzimba vakapotsa vaoma mitezo, uye masangano pachawo akatyisidzirwa nekuvharwa: kwaive nekurasikirwa, matambudziko nekutsvaga zviwanikwa zvemabhuku matsva, uye pakanga pasina mukana wekubhadhara dzimba dzekudhinda.
Imba yekutsikisa "Logvinov" iri zvakare pa hiatus. Chitoro chemabhuku chakavharwa uye chinongoshanda online.
Isu takagara tichigamuchira nhau kuti tsika dzeBelarusian dzaisatendera mabhuku evamwe vanyori uye / kana vaparidzi kupfuura. Nekudaro, iyo novel naViktar Marcinovič "Revolution" (sender - knihi.by) haina kubvumidzwa kunze kwenyika. Bhuku "Belarusian National Idea" naZmitser Lukashuk naMaksim Goryunov zvakare havana kusvika kune vatengi vekunze.
Runyorwa rwakadhindwazve "Imbwa dzeEurope" naAlhierd Bacharevič, iyo yakasvika ichibva kuLithuania kuenda kuYanushkevich imba yekutsikisa ine makopi e1000, yakatumirwa kuongororwa kwetsika uye kuongororwa kwekuvapo (kusavapo) kwekunyanyisa mukati maro. Mhedziso haina kupihwa mushure memazuva makumi matatu ekarenda; nhasi kutenderera kwave kuri kuongororwa kwe30 mwedzi.
Bhuku "Belarusian Donbass" naKaciaryna Andrejeva (Bachvalava) naIhar Iljaš aive akazivisa kunyanyisa. Kukwidza kwaIhar Iljaš kupokana nekuzivikanwa kwebhuku iri sekunyanyisa zvinhu kwakarambwa - inoramba iri muchimiro ichi. Mutori wenhau Roman Vasyukovich, akapinza makopi maviri ebhuku muRepublic of Belarus kunyangwe risati ranzi rakanyanyisa, akabatwa nemhosva uye, semhedzisiro, akaripiswa faindi yezvikamu makumi maviri (madhora mazana maviri nemakumi maviri).
Izvo zvakagumiswa kuti iro bhuku "Pfungwa yeNyika yeBelarusian" ine "Zviratidzo zvekuratidzwa kwekunyanyisa". Nekudaro, hapana ruzivo nezve dare rakapa mutongo wekuti bhuku iri rine zvinhu zvekunyanyisa uye izvozvi bhuku racho harinyorwe pachinyorwa chepamutemo chezvinyorwa zvine hukasha. Zvakadaro, pakanga paine mhosva yakanangana nemugari wedunhu reMinsk, Jahor Staravojtaŭ [Yegor Starovoitov], uyo akatongerwa kuwanikwa nebhuku iri, iro rakatengwa kuchitoro chehurumende ndokutorwa risati rawanikwa riine "zviratidzo zvekunyanyisa. ” Kutongwa kwakanangana naJahor Staravojtaŭ kwakamiswa chete nekuda kwekuguma kwetemu yekuunza kune wehutariri basa (mwedzi miviri).
Imwe nyaya yechirango chevaverengi yaive yekuvharirwa kweva pension nekuda "kutora chikamu mune zvisiri pamutemo chiito" - kuverenga mabhuku akanyorwa nevanyori veBelarusian muchitima: Nil Hilevich, Yakub Kolas, Uladzimir Karatkievich nevamwe vanyori vekare. Panguva yekubvunzurudzwa, mupurisa akadana mabhuku aya mabhuku ekupikisa.
Isu takanyora kuti mabhuku akati wandei aive kushorwa paterevhizheni yenyika. Aya mabhuku naUladzimir Arloŭ (” Imiony Svabody", Alaksandar Lukašuk ("Iyo Adventures yeAAR muBelarus"), Uladzimir Nyaklyayew (" Kon "), Paviel Sieviaryniec (" National Idea "), Aleh Latyshonak (" Žaŭniery BNR ")," Kalinoŭski na Svabodzie "uye" "Slounik Svabody" "rakaburitswa neRadio Svaboda, ARCHE Magazine nevamwe. .
Bhizinesi "Belsoyuzpechat”Unilaterally akagumisa zvibvumirano zvekutengesa zvinyorwa zvakadhindwa, pakati pazvo paive nepepanhau rine zvinyorwa zvemusoro wetsika kusanganisira pepanhau" Novy Chas "nemagazini" Nasha Gistorya ". Pakarepo mushure, Belpochta akagumisa zvakare chibvumirano neaya mavhezheni, uye kunyoreswa hakuchapihwa kubvira muna Chikunguru 2021. Zvimwe zvitoro zvemabhuku zvehurumende zvakasiya zvakare kutengesa.
Zvinozivikanwa kuti manejimendi e "Belkniga”Akabvisa mabhuku nevanyori vanoverengeka kubva mumashalofu ezvitoro zvavo: Viktar Kaźko, Uladzimir Nyaklyayew, Marcinovič Viktar nevamwe. Iyo kambani yakamisa zvakare chibvumirano chekugadzirwa kwe "Dzidziso dzeMabhuku dze20th Century" (bhuku rakapepetwa naLyavon Barshchewski) pamberi pechirongwa.
Masekuru akatanga kuuya kumaraibhurari achida kubvisa mabhuku eimba yekutsikisa yeHarvest nezve nhoroondo yemauto, kunyanya mabhuku na Viktar Rakari "Nhoroondo yemauto yeBelarus. Magamba. Zviratidzo. Mavara ”uye“ Zviratidzo zveMasoja zvevaBelarusian. Mabhanhire nemaunifomu ”. Zvinozivikanwa zvakare kuti mabhuku aAlhierd Bacharevič anobviswa mumaraibhurari ehurumende.
NZVIMBO DZEMAOKO NESANGANO
Kubva kutanga kwa2021, isu takanyora chiitiko chakanangana nekugadzira zvipingamupinyi kuzviitwa kwenzvimbo dzakazvimiririra dzetsika. Maitiro aya haana kungoenderera mukati memwedzi mitanhatu yapfuura asiwo akashandurwa kuita mafomu ekumanikidza kumasangano aya. Kudzoreredzwa kwakatanga nekubvunzurudzwa kwemaneja, kusecha, kubatwa kwemagwaro nepfuma, uye ndokuenderera mberi muchimiro chekuwongorora kwakawanda neDhipatimendi Rezvekutsvagisa Kwemari, Mutero Wekuongorora, zvikamu zvebazi reEmergency Situations, nezvimwe. fomu yakanyanyisa yekumanikidza kwehutongi - kumiswa kwemasangano.
Pakutanga kwegore, muridzi wenzvimbo akagumisa unilaterally chibvumirano chekurendesa neOk16 Cultural Hub, semhedzisiro yekuti zviitiko zvese (kunyanya zvemitambo) zvakamiswa. Gare gare tsvagurudzo dzakaitwa munzvimbo yemagariro "Druhi Pavierch" [Iyo Yechipiri Pasi "uye Space KH (" Kryly Chalopa "). MunaEpril, iyo emergency emergency uye chiteshi chehutsanana chakauya kune "Mestsa" nzvimbo yechiitiko, semhedzisiro iyo saiti yakavharwa kusvikira kutyorwa kwagadziriswa.
Bhawa uye nzvimbo yehunyanzvi Nzvimbo Yechitatu ("Третье место") muGrodno neRed Pub vaive kumanikidzwa kuvhara. Iyo Minsk kirabhu yemimhanzi Graffiti ("Граффити") yakaunzwawo nezvipingaidzo (kirabhu yakavharwa asi gare gare yakakwanisa kuvhura zvakare). Mhemberero yeazvino art Moving Art Festival yakamiswa uye nzvimbo yehunyanzvi MAF yakavharwa zvachose.
Kutanga muna Kubvumbi, kumanikidza kwekutonga kwakawedzera uye kwakatanga kutora fomu yakanyanyisa ye liquidation. Saka, muna Kubvumbi 19, iyo Economic Court yedunhu reBrest yakafunga kudzimisa “Chikoro chePoland” LLC ("kuitira kuchengetedza nyika uye zvido zveveruzhinji"). Musi waMay 12, Economic Court yeGrodno yakatonga kudzimisa tsika nemagariro edzidzo "Center for Urban Life" (chikonzero chiratidziro chaAles Pushkin, icho chinonzi chakaratidza mufananidzo unowira pasi peMutemo paCountering Extremism.). Musi waJune 18, zvakazozivikanwa kuti muBrest zviremera zvakamisa musangano wezvemagariro "Kryly Chalopa Theatre" uye zvetsika nedzidzo "Grunt budushchego". Hwaro ndiko kuitwa kwezviitiko zvisingaenderane nezvinangwa uye chidzidzo chakataurwa mugwaro. Musi waJune 30, zviremera zvakakumbira kumisa zviitiko zve Goethe-Institut uye yeGerman Academic Exchange Service (DAAD) muBelarus, iwo makuru masangano ekudzidza mutauro wechiGerman netsika kutenderera pasirese. (Semazuva ekutanga ehafu yepiri yegore, zvakaziviswa kuti Brest Regional Development Agency “Dzedzich”, iyo yakaita mutambo wemitambo uye zvimwe zviitiko zvetsika, yakabviswa).
Imwe nzira yekumanikidza kumasangano kuongororwa kusati kwakarongwa kubva ku Bazi Rezvemitemo. Masangano eruzhinji akatanga kugamuchira tsamba pamusoro pekutarisa kutevedzera kwavo zvinodiwa nemutemo weBelarusian. Rondedzero yemagwaro akakumbirwa inoenda muzvakawanda zvezvinhu, inokanganisa ingangoita makore 3-4 ekubasa kwesangano, uye mavara iwo pachawo neruzivo rwekuenderera mberi kwekutarisa anouya nekunonoka kwevhiki, semhedzisiro yemazuva mashoma chete, kana kwete zuva, zvasara zvekutora magwaro akumbirwa. Zvinozivikanwa kuti tsamba yakadai yakagamuchirwa ne "Belarusian PEN-Center" uye "Belarusian Committee yeInternational Council for Monuments uye Sites (ICOMOS)". (Sezve mazuva ekutanga ehafu yepiri yegore, zvinozivikanwa zvakare kuti tsamba yakadai yakatambirwa ne "Batskaushchyna" uye "Mubatanidzwa weVanyori veBelarusian"). Kubva pakupera kwaJune, zvinozivikanwa kuti "Belarusian Committee yeICOMOS", zvichitevera zvabuda pakuongorora, yakagamuchira tsamba kubva kuHurumende yeJustice nekupihwa yambiro kusangano iri maererano nekutyorwa kwemutemo. uye kudiwa kwekutora seti yematanho ekubvisa kutyorwa.
Kudzoka mu2020, "Hondo yakaziviswa" pane zvekutangisa zvirongwa zvakavaka bhizinesi pachikamu chenyika (zviratidzo zvenyika, zviyeuchidzo). Nekudaro, mukati memwedzi mitanhatu yapfuura, uye kunyanya mukota yekutanga yegore, kwese Belarus zvipingamupinyi zvakagadzirwa kune zvitoro zvaitengesa zviratidzo nenyika zvipfeko: "Kniaź Vitaŭt", Symbal.by, "Roskvit", "Moj modny kut ", Vokladki, БЧБ.bel," Admetnasts "," Cudoŭnaja krama "," Chameleon ", LSTR Adzieńnie, musangano moj rodny kut, dhizaina mbatya brand Honar. Zvitoro uye / kana varidzi vakaongororwa nevashandi vemarudzi ese ebasa: Ministry of Emergency Situations, iyo FDI, Dhipatimendi reKurwisa Mhosva dzehupfumi, Dhipatimendi reKurwisa Mhosva Yakarongeka, mapurisa, OMON, Labor Protection Inspectorate , iyo State Standard, nezvimwe. Muna Chikumi, chitoro "Admetnasts" chakashanyirwawo nevamiriri vebazi redzidziso redare repamusoro reguta vane zvirevo zvezvinhu zvaive nemavara matsvuku nemachena.
Zvimwe zvitoro nemasangano zvakamanikidzwa kumisa zviitiko zvavo muchidimbu kana zvizere:
Nekuda kweakawanda macheki, matare, faindi uye kubatwa kwezvigadzirwa, iyo Brest online chitoro "Kniaź Vitaŭt" yakavharwa.
Offline uye tora zvitoro zveSymbal.by akavharwa. Chitoro chinotengesa chete zvigadzirwa zvemadhijitari.
Pasina chitoro "Moj modny kut" haisisina chitoro; pachinzvimbo ikozvino inoshanda chete sechitoro chepamhepo Iyo kumanikidzwa kuvhara yeBudźma-krama yakaziviswa.
Chitoro cheGomel "MROYA" chakazivisa kuti chave pedyo kuvhara (nekuda kwezvikonzero zvehupfumi).
MIBVUNZO YENYAYA DZENYAYA
Musoro wakaparadzaniswa uyo unoitika mune kutyorwa kwekodzero dzevashandi vetsika uye kodzero dzetsika, asi unotora nzvimbo yakatsaukana muhurukuro yevakuru vakuru, ndiwo mafungire kumatunhu anokakavara mudunhu rekurangarira nhoroondo.
Mukutaura kwevamiriri venyika, maitiro aya akaiswa se "kudzivirira kukudzwa kweNazi." Nekudaro, mudunhu reMogilev, semuenzaniso, boka rinoshanda rakagadzirwa kuti riongorore mhosva yekuparadza rudzi rwevanhu veBelarusian panguva yechipiri Hondo Yenyika, uye A. Dzermant, muongorori kuInstitute of Philosophy yeNational Academy yeSainzi yeBelarus, inoratidza kuunganidza, kunyora uye kuburitsa chokwadi chakadai kune "vekudyidzana" vekuMadokero. Mukuverenga kwekutanga, vatevedzeri veParamende vakatora bhiri rekudzivirira kugadziriswa kweNazi. Bazi rezveTsika neRepublic of Belarus, pamwe neBrest dunhu neBerezovsky matunhu makuru, vakaita zviito zvakakumikidzwa kuzviitiko panzvimbo yemusasa wevasungwa muguta reBereza-Kartuzskaya (yava kunzi Bereza, Brest dunhu). pakutanga zviremera hazvina kuratidza kufarira nzvimbo ino.
Kana zviri zvekutyorwa mukati megadziriro yenyaya iyi:
Musi wa28 Kukadzi, Chikoro chePolish Social Scout chakatumidzwa zita raRumuald Traugutt chakaita chiitiko cheZuva reChirangaridzo che "Varwi Vakadzingwa" kuBrest. Vakuru vakaona izvi sekushinga kweNazi. Ichi chiitiko chakatungamira mukumanikidza kukuru munharaunda yePoland, iyo "Dare rePoland", uye anti-Polish tsika tsika mune zvese. Nekuda kweizvozvo, munaKurume hutungamiriri hweUniversity of Poles (husinga zivikanwe muBelarus) hwakachengetwa, uye kusecha kwakaitwa mumasangano muHrodna, Brest, Baranavičy, Lida, uye Vaŭkavysk. Kushushikana kwenhengo nevamiriri veUnited Union yePoland uye vashoma vePoland muBelarus yose ichiri kuenderera. Sachigaro weUnion of Poles, Andżelika Borys uye nhengo yemubatanidzwa, Andrzej Poczobut, vakasungwa kubva munaKurume uye vari kutongwa. Director we LLC "Polish Chikoro" Anna Paniszewa, mukuru webazi reLida re "Union of Poles" Irena Biernacka, uye director wechikoro cheveruzhinji ku "Union of Poles muVolkovysk" Maria Tiszkowska, vakaiswawo mutirongo. yekutongwa kwakafanana kubva munaKurume. Musi waJune 2 zvakazozivikanwa kuti vatatu vakaendeswa kuPoland. Andżelika Borys naAndrzej Poczobut vakaramba kuburitswa munyika. Ivo vese vaizivikanwa sevasungwa vezvematongerwo enyika.
Zvakare munaKurume. Holocaust).
Tsamba inosvibisa yakanyorwa nezve Natallia Arsennieva Literary Award uye nezvemunyori Natallia Arsennieva-Kushel iye amene, kwaanodaidzwa kunzi "mushandirapamwe" uyo akakotamira chena-tsvuku-chena mureza; zvinonzi anti-Semitic zvinyorwa kubva muchigaro chiri kuverengerwa kwaari. (Cherekedza: Natalya Arsenyeva-Kushel - munyori wenziyo "Mahutny Boža" yakanyorwa muna 1943, iri kubatwa nemhosva yekuita kwayo nhasi).
KUNZWISISA UYE KUSUNUNGUKA KWAKASIKANA
Kumhan'arirwa kwemutambi Ales Pushkin kuri kuenderera mberi, vanyori, mabhuku, dzimba dzekutsikisa, kuratidzira, kuita, makonzati, rwiyo rwe "Mahutny Boža" "uye mamwe masangano etsika nemabasa akaongororwa.
Vaimbi nevatambi vepa stage vakarambidzwa zvitupa zvekushanya: Kasta, J: Morse, RSP, nezvimwewo, SHT haina kuwana mvumo yekutamba "Iye Aimbova Mwanakomana" zvichibva mubhuku raSaša Filipienka [Sasha Filipenko], uye "Che Theatre" haigone kuwana chikuva chekuridza yavo iconic tamba "Dziady".
The Maxim Sarychau kuratidzira "Ndinogona kunzwa shiri", yakatsaurirwa kuna Maly Trostenets (Little Trostenets), musasa mukuru wekufa weNazi, wakagara isingasviki awa.
Zuva rakatevera mushure mekuvhura, chiratidziro "Muchina unofema, asi ini handidi", yakatsaurirwa kuna vanachiremba veBelarus uye matambudziko avakatarisana nawo mugore redenda, zvakamiswa. (Cherekedza: chiratidziro chakaitika munzvimbo yeMiesca yechiitiko).
Mazuva maviri pamberi pechirongwa, hombe kuratidzwa kweboka reunyanzvi "Pahonia"kusanganisira basa "Aqua / areli +" na Ales Marachkin, yakavharwa (miviri yemifananidzo yakatsaurirwa kuna Nina Bahinskaja [Nina Baginskaya] naRaman Bandarenka [Roman Bondarenko] - vane hunyanzvi hwekuratidzira muBelarus).
Pasina tsananguro, Viktar Barysienkaŭ's mufananidzo wekuratidzira "Inguva yekurangarira", haina kuitirwa mudunhu museum weVitebsk. ("Zvinoita sekuti mumwe munhu akaona kukanganisa kwemifananidzo mumifananidzo yemachechi akaparadzwa"). Mazuva mashoma zvisati zvaitika, hurukuro yemunyori wenhoroondo muraibhurari yedunhu yakabviswa.
Nezvikonzero zvinopfuura Siarhiej TarasaŭKudzora, kuratidzwa kwake bhuku "Eufrasinnya - Ofrasinnya - Aufrasinnya. Nguva yake, muchinjikwa wake ”wakanonoka.
From Nadzia Buka's [Nadia Buka] kuratidzwa Asabistaja sprava ”(Bhizinesi rega rega) muGrodno, ye56 canvases, 6 akangoerekana anyangarika - sezvazvakazoitika, ava ndivo avo vane imwe mubatanidzwa wechena uye mutsvuku (zvakajairika kuti mamwe acho akapendwa pamberi pa2020).
Kutya kutambudzwa kwevanyori, timu yemutambo wemafirimu WATCH DOCS Belarus yakadzosera mutambo wavo wepamhepo zvachose. Mutambo "Tsuro chena, tsvuku tsvuku" neiyo HomoСosmos theatre yakamiswa kakapetwa kagumi kare. Mafungiro echikoro anoona kuti vadzidzi vanoendeswa kumamuseum, kwete zvakavanzika. Mubhawa reHrodna, menyu yakaongororwa (ivo vaida kuti zviso nemazita zvinyorwe), umo makadhindwa mifananidzo yevaBelarusian vane mukurumbira. RTBD yakabvisa kubva kune yayo repertoire mutambo "Manzwi kubva kuChernobyl" (zvichibva pabasa reiye weNobel Sviatlana Aleksijevič). Uye Sviatlana Aleksijevič nhasi angangodaro ari mumwe wevanyori vakanyanya kuongororwa: zita rake rakabviswa pabutiro remagazini, iye aisatenderwa kutaurwa mumakirasi ezvidzidzo zvechikoro, uye vezvenhau vehurumende vaigara vachimhura kukudzwa kwake uye mukurumbira webhizinesi.
ZVIITIKO ZVEVANHU ZVENYIKA NEZVEMARI
Tatove takadoma mienzaniso yekutyorwa mukati meumwe neumwe wemapoka matatu ekodzero: kodzero dzevanhu nezvematongerwo enyika (kutambudzwa kwevanopokana, kusungwa zvisina tsarukano, mamiriro ekuvharirwa mumasangano akavharika, zvirevo zvinosvibisa, nezvimwe); tsika nemagariro (kudzvinyirira, rusununguko rwekugadzira zvinhu, kodzero yekushandisa zviratidzo) uye kodzero dzezvemagariro pamwe nehupfumi (kumanikidzwa kumiswa kwezviitwa, kutorerwa pfuma, kugadzirwa kwezvipingamupinyi zvehutungamiriri mukuitwa kwezviitwa uye kumiswa seyakanyanya chimiro).
Imwe mhando yekutyora mukati mehurongwa hwekodzero dzezvehupfumi pamwe nehupfumi ndiko kushomeka uye nekusarudzika mamiriro erutsigiro rwehurumende, mune vasiri-nyika vatambi vetsika vangango batiswa zvachose kubva muchirongwa ichi. Kusiyana nehurumende-inomhanya tsika tsika, vasiri-vezvematongerwo enyika vatambi havagamuchire rubatsiro kana kusarudzika. Saka,
Pakupera kwaKurume, iyo Kanzuru yeMakurukota yakaburitsa chisarudzo chine runyorwa rwakashandurwa rwe kushamwaridzana kwevanhu, mibatanidzwa nemasangano, uye nheyo dzakatemerwa coefficient ye0.1 kusvika padanho rekurendesa rekutanga. Nekudaro, kubva Kubvumbi iyo mutengo wekurenda nzvimbo wakawedzera kagumi yemasangano makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe, ayo mazhinji awo aisaziva uye nekudaro haana kuwana nguva yekugadzirira pamberi. Pakati pemasangano eruzhinji pane akanyorwa pane avo vane zviitiko zvinokanganisa nharaunda yetsika yenyika: "Belarusian Library Association", "Belarusian Union yeVagadziri", "Belarusian Union yeVanyori", "Belarusian Union yeVanyori", "Tsika dzeBelarusian Fund "," Belarusian Association yemakirabhu "UNESCO", uye "Belarus Dance Sport Alliance".
Yakavanzika mamuseum vari kusangana nematambudziko- kana mamiziyamu ehurumende akatsigirwa nehurumende, saka zvakavanzika zvinoshaya rutsigiro uye vari pamucheto pekupona. Nekudaro, rakasarudzika komisheni yedare repamusoro reguta rakatorera Grodno "Tsikavy Museum" mari yakabhadharwa yereti, saka mabhiri akura ka6. Pakati paApril, zvakazozivikanwa kuti iyo museum yakavharwa. Iyo renti yeMuseum yeMaguta Hupenyu uye Nhoroondo yeHrodna yakawedzerwawo. Parizvino, muridzi anobhadharira mari nemari yake kuti achengetedze miziyamu. Mamiziyamu ezvivakwa zvidiki - Grodno Mini uye Minsk "Strana mini" - arikusanganawo nematambudziko uye ave padhuze nekupona.
rimwe remasangano ekare kwazvo munyika rakasangana nematambudziko emari - iyo "Frantsishak Skaryna Belarusian Language Society". Muna 2020, iyo nzanga yakakwanisa kubhadhara rendi yezvivakwa chete nekuda kwemipiro;
imba chete yekutsikisa muBelarus inonyanya kugadzirwa kwenhoroondo yemuno uye yekuyeuchidza mabhuku "Riftur" uye nhoroondo yemuno Internet zviwanikwa planetabelarus.by havasi kupona;
vagari vari kurwisana nekuvharwa kweraibhurari mumusha weLielikava mudunhu reKobryn; raibhurari ndiyo yega yakasara nzvimbo yetsika munharaunda yekumaruwa.
Iyi kodzero zvakare iri muboka rekodzero dzezvehupfumi pamwe nehupfumi uye inosanganisirwa muTop 10 kodzero dzinowanzo kutyorwa mukati mehafu yekutanga ya2021.
Mune angangoitika ese mamiriro ekudzingwa akanyorwa mukutarisa kwedu, kutyorwa kwekodzero yekushanda kwakabatana nekutambudzwa kwevanopokana uye kutyorwa kwekodzero yerusununguko rwekutaura. Izvo zvaive zvinhu zviviri izvi zvakatungamira kuchokwadi chekuti zvimiro zvetsika, zvakamboonekwa munzvimbo dzinoshanda dzevanhu, vakadzingwa pamabasa avo kana mamiriro akagadzirwa kuvamanikidza kuti vasiye chigaro.
Vashandi vakadzingwa / havana kuvandudzwa:
dzemitambo: Mogilev Regional Drama Theatre, Grodno Regional Drama Theatre, National Academic Theater inonzi Yanka Kupala, Bolshoi Theatre yeBelarus, National Academic Drama Theatre yakatumidzwa zita raMaxim Gorky;
mamiziyamu: iyo Museum of Nhoroondo yeMogilev, iyo Novogrudok Museum yeNhoroondo uye Yemunharaunda Lore, Imba-Museum yaAdam Mitskevich muNovogrudok, iyo Museum yeBelarusian Polesie, iyo State Museum yeNhoroondo yeBelarusian Literature nevamwe;
masangano edzidzo: Belarusian State Academy of Arts, Grodno State College yeMimhanzi, Yanka Kupala State University yeGrodno, Polotsk State University, Mogilev State University, Minsk State Linguistic University nedzimwe nzvimbo.
KUSARURA PAMUTAMBO WEMA BELARUSIYA
Paive nemakumi matatu nematatu mamiriro erusarura zvichienderana nemutauro. Iyo yakawanda kwazvo yavo iri pamusoro pemutauro weBelarusian (munzvimbo yechipiri chiPolish). Mamiriro ezvinhu ane chekuita nevanhu vaviri nemasangano pamwe nekusarura mutauro padanho renyika.
Nekudaro, isu takaunganidza anotevera kesi:
Muhupenyu hwezuva nezuva:
Adam Shpakovsky ane makore makumi matanhatu nemashanu anochengetwa pamudyandigere akavharirwa kuMinsk, vavakidzani vakanyunyuta pamusoro pake "nekusvota munhu wese nemutauro wake weBelarusian."
Musi wa14 Chikumi, Yulia akabvunza chiremba kuMinsk District Polyclinic Nha. 19. Paaikwazisa, akataura muchiBelarusian. Mukupindura, chiremba akatanga kukwidza izwi uye akaudza Julia kuti ataure "mutauro chaiwo."
Musi waMay 13, Zmitser Dashkevich, mushure mekusungwa kwekutongwa muZhodina nzvimbo yekuvharirwa kwenguva pfupi, akanyora muprotocol muBelarusian kuti akagamuchira zvinhu zvakatorwa zvese uye aive asina zvikumbiro. Mukuru wejeri akaudza Dashkevich kuti anyore protocol muchiRussia. Zmitser akaramba, izvo zvaakagamuchira kurohwa pamapfudzi.
Valadar Tsurpanau akaiswa muchitokisi chemazuva matatu kwemazuva echipiri kechipiri nekuti anotaura Belarusian.
Illa Malinoŭski akataura kuti panguva yekusungwa kwake uye nenguva muDhipatimendi rePinsk Dhipatimendi reZvemukati (Dhipatimendi reDunhu reMukati) muna Kubvumbi 22, akanzwa kuseka kutaura, kutuka uye kuda kutaura chiRussia.
Vagadziri vanoverengeka vanoramba kushandisa mutauro weBelarusian pane kurongedza uye zvinyorwa zvezvigadzirwa zvavo.
Mazhinji emakambani haana shanduro yemutauro weBelarusian webhusaiti yavo.
Zviremera zviri kuita zvese zvinobvira kusarega marezinesi zviitiko zvekudzidzisa zveNil Hilevič University, yunivhesiti yemutauro weBelarusian, yakagadzirwa neBelarusian Language Society mu2018.
Makirasi ekutaura chiBelarusian haatsigirwewo. Semuenzaniso, mumusha weAmielaniec, dunhu reKamianiecki, Brest dunhu, chikoro chekumaruwa uko kurairirwa kunoitwa muBelarusian chiri kuvharwa. Sekureva kwevakuru iri kuvharwa nekuda kwekushomeka kwemamiriro ezvinhu uye huwandu hwevadzidzi.
Dambudziko nekuvhura kirasi inotaura chiBelarusian nekuda kwezvipingamupinyi zvakagadzwa nedhipatimendi redzidzo. Chikoro chevazhinji chikoro chingaramba kupa dzidzo mumutauro wechiBelarusian.
Mumatunhu eBelarus, kurairirwa kwemutauro weBelarusian kwakadzikira kusvika pamatanho ekurairidzwa mutauro wekunze.
Pane dambudziko hombe mukushayikwa kwevaBelarusian vanotaura varapi, pamwe neakaremara mabhuku muBelarusian.
KUMWE KODZERO DZESANGO
Pamusoro pezviitiko zvekurangwa kwekutakura, kuchengetedza kana kuverenga mabhuku ataurwa muchikamu "Zvinyorwa", pamwe nenyaya dzekusarura kumutauro weBelarusian, dzimwe nyaya dzekutyora kodzero dzetsika dzevaBelarusian dzakanyorwa. Zvikuru sei:
Kugadzirwa kwezvipingamupinyi mukushandiswa kwekodzero yekushandisa chigadzirwa chigadzirwa: kusungwa zvisina kufanira kwevadzidzi muzvidzidzo zvemitauro yeBelarusian muVaŭkavysk; kuperekedzwa kwenzendo kana kuvharirwa kwevafambi muPolack, Navahrudak, Minsk; kusungwa uye kutongwa pamusoro pevateereri vekonzati muSmaliavičy; kuvharirwa zvisina tsarukano nekupihwa mutongo kwemaawa makumi maviri nemana ekusungwa kwehutongi kwevaoni vemutambo "Tsuro chena, tsuro tsvuku".
Kutyorwa kwakanangana nekuteerera Mutemo pamusoro peDziviriro yeNhoroondo uye Netsika Heritage.
Pamwe chete, zviitiko zvakawanda zvakanyorwa pamusoro pekutarisa kukuru:
Kuzvidza zvine chinangwa kwevemagariro venhau muhurumende midhiya.
Kurwisa zviratidzo (kubviswa kwemachena-matsvuku-machena machena) uye kubatana kwezviito zvesangano rekuratidzira.
Yakaderera manejimendi yenyika mamiriro mumunda wetsika: saizi yebhajeti yemazororo eruzhinji, matsva matsva, propaganda, kumanikidza kunyoreswa kumapepanhau nevamwe.
KUMWE RASIKO RETSIKA:
Mabhuku evana anochengetera nyika kuzara ari kumanikidzwa kuvhara kana vari mumamiriro ezvinhu akaoma zvemari.
Pamwe pamwe nekumanikidzwa kuenda kubva munyika kunovimbisa kuchengetedzeka kwemunhu, vanhu vakasika vari kusiya nyika vachitsvaga kuzviziva. Pakutanga kwa2021, vatambi veiyo Hrodna theatre avo vakarasikirwa nebasa vakasiya Lithuania. Musi waJuly 9, kuita kwavo kwekutanga kwakaitika muVilnius. Iyo yazvino art theatre yakamanikidzwa kutama kubva kuBelarus ndokutangazve basa rayo muKyiv. PaMay 20, ndipo paive apo pakaitwa kuratidzwa kwemutambo zvichibva mubhuku raSaa Filipienka [Sasha Filipenko] "Aimbova Mwanakomana" kwakaitika. Kwegore rinotevera, mukonisoni uye munyori waJahor Zabielaŭ [Yegor Zabelov] akatamira kuPoland. Munyori wenhoroondo, mukwikwidzi wenyaya yehunyanzvi, uye mudzidzisi Jaŭhien Malikaŭ, akadzingwa kuyunivhesiti, akaenda kuPoland kunodzidziswa kwegore rimwe chete. Dzimwe nyaya dzerudzi urwu dzakaonekwa ..
Zvakaoma kushandira hunyanzvi kana "nyika isina nguva yemitemo", apo zvese zvirevo - zvemutemo nezvevanhu - zvakatyorwa.